कस्तो संस्कार ? चिहानबाट लास निकालेर गाउँ घुमाउने - chukuprakash | Nepali Lifestyle,Nepali literature,entertainment,Software
Home » अचम्म संसार » कस्तो संस्कार ? चिहानबाट लास निकालेर गाउँ घुमाउने
कस्तो संस्कार ? चिहानबाट लास निकालेर गाउँ घुमाउने
यो संसारमा विभिन्न संस्कृति तथा परम्परा भएका मानिस छन् । यहाँ यस्ता आदिवासीहरु छन् जसको परम्परा तथा संस्कृति अरु मानिसकालागि अनौठो मात्र होइन सुन्दा पनि आङ नै जिरिंग बनाउने खालको हुन्छ ।
इण्डोनेसियाको सुलावेसी प्रान्तस्थित तोराजा जिल्लामा बस्ने एक आदिवासी समुदायले मनाउने एक पर्व यस्तै अचम्मको छ । स्थानीय भाषामा मानेने भनिने उक्त पर्वमा चिहान खोतलेर मानिसको लास निकालिन्छ अनी उक्त लासलाई नयाँलुगा लगाइन्छ ।
हामी कहाँ गाइजात्राको दिन मृतक आफन्तको सम्झना तथा सम्मानमा गाइको प्रतिक बनाएर सहर घुमाउने चलन छ । तर ती आदिवासीहरु भने चिहानबाट साँच्चीकै मृतकको लास निकालेर नयाँ कपडा लगाइदिएर गाउँ परिक्रमा गराउँछन् । हरेक ३ वर्षमा यो पर्व मनाउने गरिँदोरहेछ । मानिस मरेको सयौँ वर्ष किननहोस् उसको आत्मा परिवारसँगै हुने विश्वास उक्त समुदायका मान्छेहरुको छ ।
उक्त समुदायका मानिसहरुले आफन्तजनको निधन भएपछि उसको शवलाई निकै जतन गरेर नकुहिने गरी चिहान बनाएर गाड्छन् । यसरी गाडिएको लासलाई परिवारजनले यो पर्वका बेला निकाल्छन्, नयाँलुगा लगाइदिन्छन्, सिँगारपटार गरिदिन्छन्, गाउँ घुमाउँछन् र फेरी उसैगरी चिहानमै गाडिदिन्छन् ।